चीन Richina - कसरी महान् आकृति तपाईंको बगैचा उपकरण राख्न
कसरी महान् आकृति तपाईंको बगैचा उपकरण राख्न
garden प्यार? यी दिन यति लोकप्रिय बागवानी संग, त्यहाँ कम्तिमा एक प्याच, पट, वा कन्टेनर यो बढ्दै केहि संग छैन भनेर धेरै backyards छन्। तर सबै भन्दा अधिक संभावना, तपाईंले आफ्नो बिरुवाहरु ध्यान धेरै तिर्ने हुनुहुन्छ र तपाईं तिनीहरूलाई बढ्न प्रयोग उपकरण गर्न धेरै छैन। Trowels, Hoes, Spades र shovels बढ्दो मौसममा दुरुपयोग को धेरै लिनुहोस्, र तपाईं एक सानो समय तिनीहरूलाई प्रेम लिन भने तिनीहरू राम्रो काम र तपाईं को लागि अब पछिल्लो छौँ।
हामी तपाईंलाई पहिले नै बगैंचामा गियर कुरा अघि, उच्च गुणस्तरीय उपकरण थप खर्च तपाईं लामो शोक र पैसा बचत हुनेछ नयाँ बागवानी उपकरण खरीद गर्दा सम्झना। बरु बाहिर लगाउने र बारम्बार प्रतिस्थापित गर्न आवश्यक हुनेछ सस्तो उपकरण भन्दा अन्तिम हुनेछ कि एक उपकरण को लागि एक सानो अतिरिक्त तिर्नुपर्छ। त्यसपछि उनलाई उचित प्रयोग! को भनाइ जान्छ, तपाईँ छ सबै एक हथौडा हुँदा, सबै कुरा एक नङ-तर जस्तो देखिन्छ यो गर्न डिजाइन गरिएको छैन केहि को लागि एक उपकरण प्रयोग गरेर बिगार्न वा तोड्न (र पनि प्रक्रिया आफूलाई चोट) गर्न छिटो तरिका हो । लामो-ह्यान्डल बेल्चा बन्चरो पछाडि एक स्लेज हथौडा छैन, एक crowbar छैन, र एक हात pruner एक इन्च शाखा मार्फत देखे डिजाइन छैन। तपाईं उपकरण को आफ्नो वर्तमान stash छैन अप गर्न केहि गर्न आवश्यक छ भने, एक मित्र देखि उधारो, वा केही घण्टा एक (विशेषता उपकरण तपाईं अक्सर आवश्यक छैन लागि एक राम्रो समाधान) भाँडामा, उपयुक्त कुरा खरीद विचार गर्नुहोस्।
एक पटक तपाईं राम्रो बागवानी उपकरण को एक सेट छ, यहाँ, तिनीहरूलाई भण्डारण सुरु हुने कायम गर्न6सजिलो तरिका हो!
तिनीहरूबाट सुरक्षित भण्डार
दुरुपयोग पछि, उपकरण को संख्या एक शत्रु तत्व गर्न जोखिम छ किनभने एक SHED एक उपकरण गरेको सबैभन्दा मिल्ने साथी हो। मोहक यो don`t यो गर्न जहाँ तपाईं तिनीहरूलाई भोलि (वा अर्को हप्ता) आवश्यक हुनेछ आफ्नो उपकरण, छोड्न हुन सक्छ रूपमा! बगैंचामा बाहिर आफ्नो सबै उपकरण एक SHED, ग्यारेज भण्डारण, वा एक weatherproof उपकरण भण्डारण एकाइ (एक ग्रामीण मेलबक्स हात उपकरण लागि ठूलो weatherproof stash बनाउँछ), र तिनीहरूले समय बाहिर खर्च गर्ने उपकरणहरू भन्दा लामो धेरै पटक पछिल्लो हुनेछ सूर्य, वर्षा र हावा (वा अग्लो घाँस लुकेका प्राप्त र त्यसपछि माथि चलाउन प्राप्त)।
बाहिरी भण्डारण काठ ह्यान्डलहरू, जो roughen गर्न सक्नुहुन्छ, दरार, विभाजन, ताना र क्षय हुनु समय लागि खराब छ। आदर्श उपकरण-भण्डारण क्षेत्र मौसम तपाईंको उपकरण सुरक्षा तर हावा परिसंचरण अनुमति दिन्छ, त्यसैले उपकरण सुक्खामा गर्न सक्छन् र खियाले र फफूंदी उत्पन्न कम संभावना छ।
तिनीहरूबाट स्वच्छ राख्न
माटो चिस्यान धारण र खियाले प्रोत्साहन, त्यसैले अब पछिल्लो गर्न टाढा सफा आफ्नो उपकरण राख्दै तिनीहरूलाई मदत गर्नेछ। त्यो पनि ठाँउ ठाँउ बाट हस्तान्तरण हुनबाट तान्नु जरा र बीउ वा माटो-सार्ने रोग को बिट रोक्न राम्रो तरिका हो। तपाईं आफ्नो उपकरण टाढा राख्नु अघि, कुनै पनि माटो बन्द धुन, वा पुटीन चक्कु (आफ्नो उपकरण भण्डारण क्षेत्रमा प्रत्येक एक राख्न) संग बन्द खुर्केर सफा गर्नु। उपकरण काटन देखि बोट रुखको रस र रेजिन हटाउन (आवश्यक छ भने, एक सानो turpentine संग) एक थाड़्ना प्रयोग गर्नुहोस्। एक अवशोषण थाड़्ना संग साफ उपकरण, विशेष गरी कुनै पनि धातु र काठ भागहरु ड्राई।
को रोग फैलाव रोक्न
तपाईं स्पष्ट रोगग्रस्त बोट सामाग्री संग काम गरिएको छ भने, पाँच मिनेट उपकरण सुखाने र तिनीहरूलाई भण्डारण अघि कुनै पनि जीवाणुहरू बन्द मार्न लागि दल्नु आधा रक्सी र आधा पानी समाधान मा आफ्नो साफ उपकरण भिजेको।
तिनीहरूबाट तीव्र बनाउन
सबैभन्दा राम्रो Cooks धारिलो चक्कु को मूल्य थाहा छ, तर कति माली तेज उपकरण बागवानी कार्यहरू बनाउन महसुस छिटो, सजिलो र बिरुवाहरु लागि अझ राम्रो केही अवस्थामा? एक Hoe वा हात pruner मा राम्रो किनारा राखन सजिलो छ र लामो समय बचत हुनेछ। तपाईंको उपकरण नीरस नभएसम्म प्रतिक्षा नगर्नुहोस्: रूपमा दैनिक sharpening आफ्नो उपकरण लागि flossing सोच्नुहोस्!
को ब्लेड को किनारा मा देख सुरु गर्नुहोस्। धेरै उपकरण एक छेउमा समतल र कोणात्मक (beveled) उल्टो पक्षमा छन्; अन्य उपकरण दुवै पक्षले कोणात्मक छन्। पनि को कोण पालन "बिभेल।" यो एक चक्कु जस्तै तेज र पातलो छ वा अधिक भुत्ते कोण मा sharpened बस धेरै किनारा छ? आफ्नो लक्ष्य मूल कन्फिगरेसन कायम छ।
बेबी धातु पार्ट्स
सबैभन्दा धातु उपकरण तिनीहरूले यसलाई प्रतिरक्षा छ स्टेनलेस स्टील, बनेको हुनुहुन्छ सम्म, खियाले रोक्न तेल को पातलो कोटिंग लाभ उठाउन। तपाईंको उपकरण एक नरम थाड़्ना साथ बगाएको मा अलसी तेल को एक गर्न सक्छन् राख्न, र आफ्नो साफ उपकरण तिनीहरूलाई टाढा राख्दै अघि द्रुत पटक-माथि दिनुहोस्। कृपया आफ्नो उपकरण प्रयोगमा मोटर तेल don`t! बगैचा पुस्तकहरू प्रशस्त अझै पनि यो सिफारिस, तर तपाईं साँच्चै आफ्नो राम्रो बगैचा माटो मा मोटर तेल राख्दै गर्न चाहनुहुन्छ? म don`t।
तपाईं कुनै पनि खियाले हेर्न भने, तार ब्रश वा Emery कपडा यसलाई हटाउन (क्रमबद्ध एक नङ फाइल गत्ता कपडा सट्टा गर्न चिपके र Metalworkers प्रयोग जस्तै) प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं पनि यसलाई दूर तेल बालुवा RUB गर्न सक्नुहुन्छ। एक मजबूत बाल्टिन आफ्नो SHED मा तेल moistened बालुवा भरिएको राख्न र बस बालुवा मा साफ उपकरण केही पटक प्रवेश। त्यो सामान्यतया यो दुवै पलिश र तेल तपाईंको एकै समयमा उपकरण लिन्छ सबै छ।
द काठ सम्हाल्नेहरू अवस्था
समय समयमा, unpainted काठ ह्यान्डलहरू भोकमरी र अर्को दिन सफा थाड़्ना संग बन्द कुनै पनि अतिरिक्त शौकीन गर्न अलसी तेल को पातलो कोटिंग लागू हुन्छ। एक नराम्ररी weathered ह्यान्डल तेल को एक एकदम बिट अप भिजेको, त्यसैले सम्म निम्न दिन सतहमा बाँकी एक सानो तेल छ पातलो कोटिंग दैनिक थप्नेछ। तपाईं एक स्थानीय हार्डवेयर स्टोरमा अलसी तेल फेला पार्न सक्नुहुन्न भने, तपाईंको स्थानीय प्राकृतिक खाद्य स्टोरमा टाउको। तपाईं संग खाना पकाउन कि Flaxseed तेल जस्तै अलसी oil- "Lin" जस्तै कुरा हो "सनी," फाइबर सन देखि गरे। यो पनि एउटा बन्द स्वाद विकसित गरेको छ कि आफ्नो भान्सा मा कुनै पनि पुरानो flaxseed तेल अप प्रयोग गर्न राम्रो तरिका हो।